Wadooyinka caasimada oo saaka xiran & Shacabka oo lugaynaya – Puntlandtimes
Wadooyinka caasimada oo saaka xiran & Shacabka oo lugaynaya
MUQDISHO(P-TIMES)- Ciidamada amaanka ayaa saaka waxa ay xireen wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho, iyaga oo u diidaya inay isticmaalaan gaadiidka noocyadiisa kala duwan marka laga reebo gaadiidka ay wataan masuuliyiinta dowladda.
Wadooyinka ay ciidamadu xireen ayaa waxaa kamid ah inta badan Isgoysyadda Muqdisho isla markaasna gaadiidka dadka shacab ah ay wataan ayaa loo diiday inay isticmaalaan, taas oo keentay in shacabka ay lugeeyaan maanta.
Sababaha wadooyinka qaar ee Muqdisho loo xiray ayaa lagu sheegay in saacadaha soo socda la filayo in magaalada Muqdisho uu yimaado madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
Xirnaanshaha wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa waxaa dhibaato ku qaba dadka shacabka ah oo xilliyada shaqada ama goobaha waxbarashada ay ku wajahan yihiin wadooyinka laga xiro isla markaasna ay ku qasabto dantu inay lugeeyaan.
Salebaan Cusmaan Nuur says:
Mooryaan Hutu Hawiye Futomadoobe bililiqo boob dhac kufsi dil mahaane wax kale ma yaqaano saa shirka madaxweynayaalka Dir iyo Daarood (Gheele – Farmaajo) ayago mooryaanta Hutu Hawiye Futomadoobe lugaynahayaan magaalada dhexdiis ayaa soconahaya